13ka Xeeladood ee Suuqgaynta Macluumaadka B2B ugu caansan | Martech Zone
Kani wuxuu ahaa infographic xiiso leh oo aan doonayay inaan la wadaago Wolfgang Jaegel. Kaliya maahan sababta oo ah waxay bixisaa aragti ku saabsan waxa istiraatiijiyad suuq-geynta suuq-geynta ay geynayaan suuqleyda B2B, laakiin farqiga aan u arkaayo waxa loo dirayo iyo waxa saameynta xeeladahaasi noqon karaan Si caan ah, liistadu waa warbaahinta bulshada, maqaallada ku yaal boggaaga internetka, joornaalada, joornaalada, dhacdooyinka qofka, daraasadaha kiisaska, fiidiyowyada, maqaallada ku yaal degellada kale, waraaqaha caddaaladda, iyo bandhigyada internetka.
87% iibsadayaasha B2B ayaa sheegaya in waxyaabaha ku jira ay saameyn ku leeyihiin xulashada bixinta.
Fikradayda, iyada oo aan wax caddayn ah, waxaan u maleynayaa in suuqleyda B2B ay dhab ahaantii waayaan. In kasta oo aan ku raacsanahay in joornaalada iyo waxyaabaha ku habboon ee ku soo noqnoqda bartaada sida baloogyada iyo maqaallada ay faa'iido u leeyihiin soo jiidashada taraafikada, farqiga u dhexeeya la'aanta bandhigyada, wargeysyada iyo fiidiyowyadu waxay u muuqdaan inay khilaafsan yihiin istiraatiijiyadda casriga ah ee B2B. Si kastaba ha noqotee, kaliya ku soo celinta martida websaydhkaaga waa hal dhibaato… laakiin tan ugu weyn ayaa ah iyaga oo ka dhigaya inay beddelaan inta ay ku jiraan goobta. Macaamiishayadu waxay ku arkeen natiijooyin aan caadi ahayn soo bandhigyada lagu dhajiyay baraha bulshada, wargeysyada ka dambeeya bogga diiwaangelinta, iyo daraasadaha kiisaska si loogu bixiyo nidaamka go'aanka iibsiga Waxay ila tahay aniga in qof kastaa uu ka shaqeynayo dhinaca wax soo iibsiga laakiin uusan aheyn dhinaca beddelka isla'egta halkan!
Tags: Suuq geyntaarticlesb2bsuuqgeynta b2bBlogsdaraasadokasbadeen warbaahintadhacdooyinkaShirarka Suuqgeyntawargeysyadabandhigyada internetkawarbaahinta lacag la siiyaybandhigyadaSuuq Goobidwarbaahinta bulshadaMedia Social Suuqsuuqgeynta fiidiyowgavideos
8-da Talaabo ee loo maro Suuqgeynta Mawduuc guuleysta